फिल्म हलभरमा एक जोडी दर्शक
फिल्म हलभरमा एक जोडी दर्शक हलवाला भन्छन्– दर्शक नआए पनि बन्द गर्दैनाैैं
पुष्पा थपलिया शुक्रबार, पुस १७, २०७७, १४:५६
काठमाडाैं- ‘रित्तो हलमा दुई जनाले मात्रै फिल्म हेरिने भइयो, त्यो पनि भूतको,’ बिहीबार दिउँसो साढे १२ बजेतिर राइजिङ मलस्थित क्युज सिनेमामा पुग्दा दुई युवायुवती फुस्फुसाउँदै थिए। सिनामंगलमा डेरा गरेर बस्ने उनीहरु घरमै बस्दा दिक्क लागेर फिल्म हेर्न आएका रहेछन्। ती युवाले भने, ‘नयाँ फिल्म त अचेल घरमै बसेर पनि हेर्न पाइन्छ नि! बाहिरको वातावरण नियालौं भनेर पो आएको त।’
क्युज सिनेमामा दुई नेपाली र दुई अंग्रेजी फिल्म चलेका छन्। नेपाली फिल्म हल बन्द हुनुअघि नै हेरिसकेका रहेछन्। अंग्रेजी फिल्म ‘दि इन्भिजिबल म्यान’ हेर्ने तरखर उनीहरूको रहेछ। एउटा मात्रै शो भएकाले उनीहरुले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपरेको दुखेसो पोखे।
‘दि इन्भिजिबल म्यान’ नै हेर्न आएको अर्को जोडी भेटियो, सिभिल मलमा रहेको क्युएफएक्स सिनेमाज्-मा। सुरज र सुनिता नाम बताउने यो जोडी थानकोटदेखि फिल्म हेर्न आएको रहेछ। आफूहरु काममा व्यस्त भइरहने भएकाले बल्लतल्ल समय मिलाएर फिल्म हेर्न आएको उनीहरुले बताए।
फिल्म हलमा आफूहरू दुई जना मात्रै रहेको जानकारी पाएपछि उनीहरुलाई अनौठो र रमाइलो दुवै अनुभूति भइरहेको थियो। ठट्यौलो पारामा आफ्नो अनुभूति सुनाए, ‘अरु कुरामा कहिल्यै पहिलो हुन नसके पनि फिल्मको टिकट काट्ने मामिलामा प्रथम भइयो।’ उनीहरुले टिकट काट्दासम्म अरु कसैले पनि टिकट लिएका थिएनन्।
उनीहरु एकछिन यताउति टहलिए। फर्केर आउँदा केही अरुले पनि टिकट काटेको जानकारी गार्डबाट पाए। तर, फिल्म हेर्नेको संख्या दोहोरो अंक छुनेसम्म थिएन।
पुस १० गते शुक्रबारदेखि नेपाल सरकारले अनुमति नदिए पनि मल्टिप्लेक्स हलहरू आफैं सञ्चालनमा छन्। अन्य क्षेत्र खुले पनि फिल्म क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै नेपाल चलचित्र संघले निर्णय गरेर हल खुलेका हुन्। हल खुले पनि दर्शक नआउँदा त्यहाँका कर्मचारी फुर्सदिला बनेका छन्।
फिल्म चलिरहँदा टिकट दिन भ्याइनभ्याइ हुने सिटी सेन्टरस्थित बिग मुभिजको काउन्टर शून्य थियो। त्यहाँकी कर्मचारी किताब पढिरहेकी थिइन्।
सिभिल मलमा रहेको क्युएफएक्स सिनेमाज्का व्यवस्थापक सुशील मानन्धरले दर्शकको उपस्थिति निकै न्युन रहेको बताए। क्रिसमस, न्यु इयर इभमा दर्शक हलमा आउने उनको अपेक्षा थियो। तर आएनन्। हल खुलेको दिन पुस १० गते क्युएफएक्समा ३३ प्रतिशत अकुपेन्सी थियो। तर, अहिले त्यो क्रम घट्दै गएको उनको भनाइ छ।
क्युएफएक्स सिनेमाज्का व्यवस्थापक सुशील मानन्धर
एउटा शोमा पाँचदेखि १० जना दर्शक आउने गरेको मानन्धरले बताए। यति संख्या आउनलाई पनि उनले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। भन्छन्, ‘हामी ९ महिनासम्म बन्द थियौं, त्यो बेलामा पनि हाम्रो खर्च उति नै थियो। अहिले पनि आम्दानी छैन तर पनि दुःखी छैनौं।’
आफूहरुले नतिजाको पूर्व अनुमान गरेर नै हल सञ्चालन गरेकाले एक जना मात्रै दर्शक आए पनि सो बन्द नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले खुट्टा उचालिसकेका छौं। अब पाइला रोकिँदैन।’
राइजिङ मलमा रहेको क्युज सिनेमाज्-का सुपरभाइजर सुवास योगी पनि मानन्धरको भनाइमा समर्थन जनाउँछन्। ‘चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रुपमा चलायमान हुन त अझै केही समय लाग्ला तर प्रयास भने जारी रहन्छ,’ उनको भनाइ छ।
क्युज सिनेमाज्का सुपरभाइजर सुवास योगी
मनोरञ्जनको क्षेत्र मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक भनिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको योगीको गुनासो छ। अहिलेको अवस्थामा हल खोल्नु नै सकारात्मक कुरा भएको भन्दै राम्रो फिल्म दिन सके दर्शकको लाम लाग्ने अपेक्षा उनले गरेका छन्।
उनले भने, ‘दर्शकहरु दिनदिनै नयाँ फिल्म कहिले लाग्छ भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। तर हामीसँग यसको जवाफ छैन। दर्शक फिल्म हेर्न तयार छन्, हल फिल्म देखाउन तयार छ तर देखाउनका लागि राम्रा फिल्म भएनन्।’
फिल्महरु होल्ड भएर बस्नुको सट्टा हलमा लगाउन पनि उनले आग्रह गरे। भने, ‘पहिले हलले फिल्म दिएन भन्नेहरु अहिले फिल्म देखाउ भन्दा पनि किन आउँदैनन्।’
लगानी सुरक्षित नहुने डरले निर्माताहरुले फिल्म नदिएका हुन्? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिले पनि राम्रा फिल्म चल्थे। नराम्रा चल्थेनन्। चलेका फिल्मले करोड कमाउँथे। नचलेका फिल्मले लगानी डुबाउँथे। अहिले पनि हुने त त्यही हो।’ यस्तो अवस्थामा राम्रा फिल्मलाई भने दर्शकले माया गर्ने उनले ठोकुवा गरे।
यता सिटी सेन्टरमा रहेको बिग मुभिजका सुपरभाइजर समीर राजबाहक भने दोधारमा देखिए। यस्तै पाराले धेरै दिन हल चलाउन नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘हेर्दै जाउँ, समयले कता लैजान्छ।’
नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान भने दर्शक हलमा नआए पनि आशावादी देखिएका छन्। माघ महिनादेखि नयाँ फिल्म लाग्ने र हल तात्ने उनको बुझाइ छ।
सुरुमा कम बजेटमा बनेका नयाँ फिल्मले बजारमा ‘हल खुल्यो है’ भन्ने जानकारी गए मात्रै पनि आधा मनोरञ्जन क्षेत्र चलायमान हुने पनि उनले बताए।
धेरै बजेटमा बनेका बहुप्रतिक्षित फिल्मका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भने, ‘व्यापारमा सेक्युरिटी सबैले खोज्छ, उनीहरुले पनि खोज्नु स्वाभाविक हो।’
आफैंले सबै घाटा बेहोर्न नसक्ने भएकाले पनि तुरुन्तै ठूला ब्यानरका फिल्म हलमा चलाउन नसकेको उनले बताए। भने, ‘हलवालाले केही समय घाटाको व्यापार गर्दा चलचित्र क्षेत्र केही हदसम्म खुल्छ भने हामी जोखिम मोल्न तयार छौं भनेर नै हामीले हल खोलेका हौं।’
देशभर १ सय ९० फिल्म हल छन्। जसमा चाबहिलमा रहेको गोपीकृष्ण मुभिज्, बालाजुमा रहेको गंगा सिनेमा हल, कोटेश्वरमा रहेके पुष्पाञ्जली सिनेमा हल र अध्यक्ष प्रधान स्वयंको बौद्धमा अवस्थित सिद्धार्थ सिनेमा मर्मतसम्भारका लागि बन्द छन्।
नेपाली कलाकारितामा 'रंगभेद', बडी सेमिङ र गरिबीको प्रश्न
‘दिन गिन गिन’ थारु भाषा र स‌ंगीत फैलाउने गीत
अजय नागर उर्फ 'क्यारीमिनाटी'
८ महिनापछि प्रदर्शन हुँदै ‘परदेशी २’ कोरोनाले थला पारेको फिल्म क्षेत्र बिस्तारै उठ्ने जमर्को गर्दैछ। शिव श्रेष्ठको ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ प्रदर्शनपछि अर्को चलचित्रले प... शुक्रबार, माघ ९, २०७७
पाँच महिना गुमनाम आदर्शले कसरी पाए प्रियंकासँग काम प्रियंका चोपडा र राजकुमार राव अभिनित चलचित्र ‘द ह्वाइट टाइगर’ नेटफ्लिक्समा प्रदर्शन गरिएको केही समय बितिसक्यो। फिल्ममा प्रियंका र रा... शुक्रबार, माघ ९, २०७७
कसरी मनाएका थिए सुशान्तले अन्तिम जन्मदिन ? बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुत बाँचिरहेका हुन्थे भने उनको आज २१ जनवरीका दिन उनको ३५ औं जन्मदिन हुन्थ्यो। निकै राम्रो अभिनय गर्ने ... बिहीबार, माघ ८, २०७७